Rudo Uye Kuroora - Iyo Agency Shanduro | Martech Zone
Rudo Uye Kuroora - Iyo Agency Shanduro
Chipiri, April 8, 2014 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Sangano redu, Highbridge, anga aripo kweanopfuura makore mashanu izvozvi uye achangobva kuzivisa shanduko yetrajectory. Gore rakapera, takanyatso kumisikidza vashandi vedu uye takazotora vatengi vazhinji vakaomarara izvo zvakatotungamira mukufa kwedu.
Isu takavaka hukama hunoshamisa nevatengi vanoshamisa - mazhinji acho anga anesu kwemakore akati wandei. Tinovada uye tinotarisira kuti vanotida - haisi yekubhadhara chete, ndizvo zvatinoda. Hapana chinhu chinoita kuti tifare kupfuura kuona vatengi vedu vachibudirira, uye hapana chinhu chinoshungurudza kupfuura apo hukama hwacho hwunotadza.
Ini ndinoshandisa yakawanda nguva manje kushanda netarisiro kuona kuti tese takazvipira kune chikuru muchato uye vese vari kutsvaga hukama hune rudo. Ini ndoda kudzivirira kupinda muhukama hwakanetsekana chero zvodii - zvisinei nehukuru hwekubatana. Hukama husina kunaka haungokanganise mutengi anobatanidzwa - zvinogona kukanganisa simba kune vese vatengi vako sezvo nguva yako nesimba zvaneta kuyedza kununura kubatikana kunetsa. Kana isu tikakwanisa kuona mamwe anonetsa emutengi maitiro mukutengesa maitiro, zvinogona kutiponesa isu tese marwadzo mazhinji emumugwagwa.
Taida kumbofara uye nekuisa mwenje pane idzi nguva dzerima… saka iyi infographic inonyora mimwe mienzaniso yemhando dzehukama isu, zvinosuwisa, kuti taifanira kubva kubva! Kusuma Rudo uye Kuroora - Iyo Agency Shanduro.
Tags: bokamunhu anoda kubetserwarudo nemuchatomuchatoUkama
Iyo A kune Z Zano kune Yega Branding
Dambudziko ne "Big Data"
Apr 8, 2014 pa 11: 33 AM
Hongu! Ndanga ndakamirira uyo! Ndinofara kuiona pakupedzisira yakabuda kuti ionekwe neruzhinji! Brilliant!
Apr 8, 2014 pa 10: 16 PM
Ndinofunga ndakambova nevashoma vevakaroorana ava, pane boka rekurapa riri pedyo here?
Apr 8, 2014 pa 10: 50 PM
Ndakafunga kuti ndizvo zvataiita vhiki yoga yoga!
Apr 11, 2014 pa 12: 12 PM
zvinosiririsa kuti ichokwadi! Waita zvakanaka, ikozvino iwe unongoda kuvaka quiz iyo vangangove vatengi vanogona kutora kuti ivasefa nekunyengera!
Apr 20, 2014 pa 12: 59 PM
RUDO neWANANO (The Agency Version) - Nice! 🙂